Mpanao mari-trano sy fanoratana bilaogy B2B | Martech Zone
Architects sy B2B Tweeting
Alatsinainy, Jolay 11, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Ireo olona manao raharaham-barotra (B2B) ireo olona dia tsy eo an-tampon'ny vaovao amin'ny fikarohana momba ny varotra, fa indraindray kosa dia mahita vatosoa ianao. Na dia io Infographic manokana io aza Pauley Creative dia mifantoka amin'ny fanadihadiana amin'ny UK Architects, Mino aho fa ny valim-pikarohana dia afaka manokatra orinasan-tserasera B2B hafa hahitana ny fomba ahafahan'ny mpanelanelana manararaotra ny fikambanan'izy ireo. Raha ny valin'ny fanadihadiana dia mampiasa Twitter ny ankamaroan'ny mpanao maritrano mba haharaka ny vaovao farany amin'ny indostria sy ny tamba-jotra miaraka amin'ireo mitovy taona aminy amin'ny indostria.
Momba an'i Pauley Creative:
Araka ny azy ireo tranonkala, Pauley Creative dia misahana manokana amin'ny marketing nomerika ho an'ny indostrian'ny fananganana. Manana traikefa amin'ny fananganana paikady marketing nomerika avo lenta sy azo refesina ho an'ny mpanjifanay izahay izay mamorona fahatsiarovan-tena amin'ny marika ary mitarika fitarihana orinasa ho an'ny orinasa mifandraika amin'ny fananganana.
LinkedIn Profile sy Fampiasana
Varotra antsinjarany + Fikarohana eo an-toerana = Wishpond